Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday
Fanamboara-dalana tsy manara-penitra
Amin’izao fotoanan’ny main-tany izao no fanararaotra amin’ny fanamboarana fotodrafitrasa. Isan’izany ny lalana. Dia manomboka manarina ny lalana simba ny fitondram-panjakana. Somary tratra aoriana ihany izany, ary hita taratra fa mitarazoka ny asa amin’ny toerana sasany. Izahay eto amin’ity gazety ity dia miresaka matetika ny hoe « rahoviana no hamboarina na harenina ny lalana Ny Avana Ramanantoanina ». Tsy aiza io fa iny manelanelana an’Andranomanalina Isotry amin’i Manarintsoa Isotry iny. Rarivato iny lalana iny, ary isan’ny antitra raha ny lalana eto Andrenivohitra, ankoatry ny amin’iny tanàna ambony iny.
Manomboka ny fanarenana ny lalana ny Avana Ramanantoanina, saingy tsy misy nokitihina ny tatadrano. Ny tatadrano ivarianan’ny rano maloto akory tsy hoe simba fa misy fikojakojana tokony atao koa fa ny fandrafetana vaovao ny rary vato ihany no atao. Fasika no akora vaovao ampiasaina.
Tany amin’ny taona 1984 tany no nanaovana ny lakan-drano amin’iny araben’Ny Avana Ramanantoanina iny. Mahatratra any amin’ny iray metatra sy sasany andaniny efatra ny haben’ilay lakan-drano ao ambanin’ny arabe ao, ary vita simenitra (betton). Fa ny vava-tatatra ivarianan’ny rano no zary simba amin’ny ankapobeny ka ilàna fanamboarana.
Misy fanarenana lalana mitovitovy amin’izany koa amin’ny faritra hafa eto Andrenivohitra. Tsy voajery manokana ny tata-drano ivarinan’ny rano maloto. Tsy tokony hadinoina fa io rano tsy mikoriana araka ny tokony ho izy io dia lasa miandrona no matetika miteraka tsy fahatezan’ny lalana eto.
Mba ataovy manara-penitra, noho izany, ny fanarenana ny lalana eto fa manjary aim-bery maina, sy vola lanilany fahatany.
Tokony hanaraka ny fenitra amin’ny fanamboaran-dalàna ny fanarenana sy fikojakojana e. Ny lakan-drano ivarinan’ny rano maloto no atao manara-penitra sy atao voalohany dia mandeha ho azy ny tohiny.
Tokony tsy hadinoina koa ny fanarenana ny sisin-dalana izay natokana handehanan’ny mpandeha an-tongotra fa matetika dia ny lalana ho an’ny fiara ihany no arenina na voakojakoja. Manan-jo hisitraka sisin-dalana tsara ny mpandeha an-tongotra. Izay koa no isan’ny antony tokony hijerena vahaolana amin’ireo mpivarotra amorin-dalana satria matetika dia feno mpivarotra ny sisin-dalana natokana ho an’ny mpandeha an-tongotra. Tokony ijerena toerana malalaka any anaty fokontany ny mpivarotra amorin-dalana fa tsy avela hibahana ny fizoran’ny mpandeha an-tongotra.
Fotoana efa tokony ampiharana ny fepetra takian’ny fampivoarana ny fiainam-piaraha-monina izao fa tsy mety ny mijanona amin’ny toerana efa tsy nampandroso. Tokony ho hentitra koa ny tompon’andraikitra amin’ity fiara mananika sisin-dalana na mijanona ambony sisin-dalana ity. Manelingelina ny mpandeha an-tongotra izy ireny ary manimba ny sisin-dalana satria tsy natao hotsahin’ny fiara ny sisin-dalana. Malemy kokoa mantsy ny sisin-dalana satria olona mandeha an-tongotra no tokony hizotra aminy fa tsy fiarakodia.
Izay manan-tsofina, aoka izy handre.